मझेरी भलाकुसारी, अंक २० (कोमलप्रसाद भट्ट) | मझेरी डट कम
Home › छलफलको विषय › स्रष्टासँग कुराकानी
editor — Mon, 01/18/2016 - 01:51
कोमलजी ! तपाईँलाई मझेरी भलाकुसारीमा स्वागत छ ।
-यहाँलाई कोटी कोटी धन्यवाद छ ।
शुरुमा, आफ्नो व्यक्तिगत र साहित्यिक परिचय पाउन सकिन्छ कि?
-मेरो नाम कोमल प्रसाद भट्ट,
जन्म -बैसाख १५ (२९ अप्रिल),
पिताको नाम:- स्व.सोम प्रसाद भट्ट तथा माताको नाम:- स्व.माया देवी भट्ट,
जन्मस्थान:- पुरानो नैकाप गा.वि.स., काठमाडौँ (हालको चन्द्रागिरी न.पा. वा.नं.२१)
देश भित्र र बाहिरबाट प्रकाशित हुने विभिन्न अनलाइनहरूमा थुप्रै कथा, कविता, गीत, गजल तथा मुक्तकहरू प्रकाशित भएको र गजल संग्रह -२, कविता संग्रह-१, मुक्तक संग्रह -१ प्रकाशोन्मुख ।
कहिलेदेखि लेखनमा लाग्नुभयो? र के कुराले प्रेरित गरायो ?
-म विद्यार्थी जीवन देखि नै कविता, गीतहरू लेख्न मन पराउँथेँ । कतिपय साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्थे पनि । पछि गएर मैले शिक्षण पेशा शुरु गरेँ । मैले ३ दशकभन्दा बढी शिक्षण सेवा गरेँ । झन्डै २५ वर्ष त माध्यमिक विद्यालय स्तरमा नेपाली शिक्षकको रूपमा रहेर अध्यापन कार्य गरेँ । आफ्नो अध्ययन र अध्यापनको विषय नै नेपाली भएको कारण पनि म नेपाली साहित्यप्रति नजिक बन्दै गएँ । त्यतिबेला कम्प्युटरको प्रचलन भैसकेको थिएन त्यसैले आफ्ना रचनाहरू डायरीमा नै थन्केर बसे ।
साहित्यिक विधा सँगसँगै म समसामयिक विषयमा लेखहरू पनि लेख्थे जो तत्कालीन समयमा विभिन्न पत्रिकाहरूमा प्रकाशित पनि हुन्थे ।
तपाईँका विशेष गरी गजल पढ्न पाइन्छ । यो विधामा लाग्नुको कारण चाहिं के होला ?
-मैले गजलको अलावा कथा, कविता(पद्य तथा गद्य), गीत, मुक्तक आदि प्रसस्तै लेखेको छु । तिनीहरू स्वदेश तथा विदेशबाट संचालन गरिएका थुप्रै अनलाइनहरूमा प्रकाशित भैरहेका छन् । गजल गेय विधा भएको र लयमा गाउन पनि रमाइलो लाग्ने भएकाले वर्तमानमा गजलप्रतिको आकर्षण दिनानुदिन बढेको कुरालाई नकार्न सकिदैन । म पनि यिनै कारणले गर्दा गजलतिर बढी आकर्षित भएको हुँ । तर म साहित्यका सबै विधासँग आकर्षित छु ।
गजलको छन्द लेखन बारे औपचारिक शिक्षा या तालिम लिनुभएको छ कि स्वअध्ययनबाटै सिक्नुभएको हो ?
-म नेपाली विषय अध्ययन गरेको विद्यार्थी आफ्नो कलेज तथा विश्वविद्यालय स्तरमा अध्ययन गर्दा छन्द बारे अध्ययन गरेको हुँ । स्वअध्ययनको कुरा त सँगसँगै आइ नै हाल्छ । पछि गएर विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा पनि छन्द समावेश गरियो । त्यसैले छन्द अध्यापन पनि गरेको हुँ । यसरी अध्ययन र अध्यापन दुवै कारणले मलाई छन्द सिक्न सहज बनाएका हुन् ।
गजललेखनमा धेरै सर्जकहरू आकर्षित देखिन्छ । यसमा त्यस्तो के जादु छ ?
-गजल नयाँ विधा त होइन किनकि नेपाली साहित्यको माध्यमिक कालदेखि नै गजल विकसित हुँदै आएको पाइन्छ । बीचमा गजल त्यत्तिकै ओझेल पर्दै गएको भएता पनि हाल आएर यो अत्यन्तै लोकप्रिय विधा बन्दै गएको छ । अन्य विधाको तुलनामा गजल विधा नै अधिकांश पाठकले मन पराउन थालेका छन् । यही नै गजल लेखनको आकर्षक तत्व हो जस्तो लाग्छ ।
गद्य लेखनमा चाहिं त्यति जाँगर चलाएको देखिँदैन त ?
लेखकहरू पाठकले जुन कुरा बढी मन पराउछन ती कुराप्रति आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । यसको अर्थ अन्य विधाहरू प्राय: निष्कृय बन्दै गए भन्ने कुरा चाहि होइन । एउटा कुरा के हो भने आज भोलि पाठक समक्ष तुरुन्तै पुग्न सक्ने सबल माध्यम अनुहार पुस्तिका हुन पुगेको कुरालाई नकार्न मिल्दैन । गजल छोटो, मिठो भएका कारण पनि सबैले पढ्न मन पराएका हुन्छन । त्यसैले गजलप्रति बढ्दो आकर्षण देखिएको हो । तर अन्य विधामा जाँगर नचलेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन ।
अमेरिकामा बस्नुहुँदो रहेछ । व्यक्तिगत जीवन र साहित्यसँग कसरी तालमेल मिलाइरहनुभएको छ ?
-वास्तवमा खाने मुखलाई जुंगाले छेक्दैन भने झैं म आफ्नो काम काजबाट उब्रेको समय नेपाली साहित्यमा लगाउँदै आएको छु । जुन बेला भन्यो त्यही बेला फुर्सद नमिल्ने कारण नेपाली साहित्य सम्बन्धी औपचारिक कार्यक्रमहरूमा भने सामेल हुन सकिरहेको छैन । तर लेखन कार्य भने नियमित जारी छ ।
त्यतातिरका साहित्यिक कार्यक्रमहरू र स्रष्टाहरूसँग कत्तिको घुलमिल हुनुहुन्छ ?
-बिल्कुलै छैनभन्दा हुन्छ । यति व्यस्त जीवन छ कि चाहेर पनि कतै पुग्न सकिदैन र कसैलाई भेट्न सकिदैन । यो यहाँको यथार्थता हो । तर पनि चाहना चाहिँ तीव्र हुन्छ ।
तपाईंको लेखनमा नेपाली समाज र संस्कृतिका कुराहरू बेसी पाइन्छन् । बाहिर बस्दा त्यस्ताले बढी घोच्ने हुन् कि सानैदेखि त्यस्तै लेख्नुहुन्थ्यो ?
बाहिर बसेका कारणले देश दुख्दा आफू दुख्नु स्वाभाविक हो । अत: यस्ता कुराले बढी घोच्छन र रचनाहरू जन्मिन्छन । यसबाहेक मेरो आफ्नो रुचिको विषय पनि यही हो -देश, समाज र संस्कृति । अनि देश भित्र र बाहिरका विसंगति र विकृतिप्रति पनि कलम चलाउन मन पर्छ । हुन त मेरा माया प्रेम सम्बन्धी रचनाहरू पनि थुप्रै छन् ।
नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका साहित्यमा मनपर्ने र प्रेरणा पाएका लेखकहरूको नाम लिनुपर्दा कसलाई सम्झनुहुन्छ ?
मलाई नेपाली साहित्यमा साह्रै मन पर्ने महाकवि देवकोटा, भूपि शेरचन, गुरुप्रसाद मैनाली, भीमनिधि तिवारी, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नै प्रमुख रूपमा पर्नुहुन्छ । विदेशी लेखकहरूमा विलीयाम वोर्डस्वर्थ, सेक्सपियर, पर्ल्स एस बक, अर्नेस्ट हेमिंग वे, गोर्की आदि प्रमुख रूपमा पर्नुहुन्छ । विदेशी लेखकको हकमा आफूले पढेका आधारमा मात्र भनेको हुँ सबैलाई पढ्न सकेको छैन ।
पाश्चात्य साहित्य कत्तिको पढ्ने गर्नुहुन्छ ? कुनै अविश्मरणीय पुस्तक छन् ?
पाश्चात्य साहित्यमा निकै रुचि छ । उपलब्ध हुनसक्ने केही पुस्तकहरू पढेको छु । मसँग भएका किताबहरू मध्ये Ernest Hemingway को The O।d Man and the Sea, Maxim Gorky को Mother, Shakespeare को Macbeth अविस्मरणीय लाग्छ ।
फुर्सदमा के-कस्ता कुराहरू गरेर दिन बिताउनुहुन्छ ?
-फुर्सदको समय धेरै जसो परिवार सँग, अध्यनमा र साहित्य रचनामामा नै सिद्धिन्छ । यदा कदा परिवारसँग कुनै नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने वा बाहिर खान खान जाने कार्यक्रम बन्छ ।
नेपाली साहित्यको अहिले कस्तो स्थितिमा छ जस्तो लाग्छ ?
नेपाली साहित्यको स्थिति अँझै विकासोन्मुख छ । कृतिहरू जन्मिन्छन पढने पाठकको संख्या उल्लेखनीय छैन । वर्षौंदेखि प्रकाशित भएका किताबहरू थन्किएर बसेका हुन्छन् । किताब किनेर पढ्ने मनोवृत्तिमा अँझै विकास हुन सकेको छैन ।
अहिलेको देखिएको इन्टर्नेट साहित्यप्रति यहाँको धारणा के छ ?
अहिले सबैभन्दा विकसित भएको कुरा इन्टरनेट साहित्य हो । वास्तवमा पाठक समक्ष छिटै पुग्न सकिने यही एक मात्र आधार भएकोले यो अत्यन्तै विकास हुँदै गएको छ र मलाई यो युगानुकुल पनि लाग्छ ।
इन्टर्नेट तथा मझेरी जस्ता साहित्यिक पृष्ठहरूको आवतले तपाईंको लेखलाई के-कस्ता परिवर्तन गरेको छ, हामीसँग अनुभव बाँड्नुहुन्छ कि!
इन्टरनेटले हजारौं साहित्यिक मनहरूसँग परिचित हुने र हजारौं पाठकहरूसँग परिचित हुने मौका प्रदान गरेको छ । यसको अलावा मझेरीले मेरा प्रत्येक रचनाहरू प्रकाशित गरेर हजारौं हजार पाठक सामु पुग्ने सौभाग्य प्रदान गरेको छ । वास्तवमा म जस्ता कुनाभित्रै हराएका प्रतिभालाई जनसमक्ष पुर्याई दिएर उनीहरूको लोकप्रियता वृद्धि गराउन मझेरीले ठूलो योगदान पुर्याएको छ । मझेरीले मेरा रचनाहरू प्रकाशित गरेर मलाई झन् झन् बढी लेख्ने प्रेरणा मिलेको छ र बेला बेलाका सुझावहरूले रचनाहरू परिष्कृत पार्दै लैजान पनि मझेरीको ठूलो योगदान रहेको छ मप्रति । म मझेरीप्रति सदैव ऋणी रहनेछु ।
कुन-कुन पत्रिकामा नियमित लेख्ने गर्नुहुन्छ ?
मझेरी मेरो अति प्रिय पत्रिका हो । हालसम्म मेरा सबैभन्दा बढी रचना प्रकाशित गरिदिने मझेरी नै हो । अत : म मझेरीमा मेरा रचनाहरू नियमित रूपमा पठाउदै आएको छु । यसबाहेक DC Nepa।, Nepa।i Post, Janapukar, Arghakhachi, समकालीन आदिले पनि मेरा रचनाहरू प्रकाशित गरिदिएका छन् ।
फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालहरू कसरी उपयोग गरिरहनुभएको छ ?
म नियमित रूपमा फेसबुक हेर्छु । आफूलाई चित्त बुझ्ने लेखकको वालमा अवश्यमेव पुगेको हुन्छु । कतिपयलाई सुझाव दिन्छु । कतिपयलाई अभिप्रेरणा दिन्छु । ट्विटर भने यदाकदा मात्र चलाउछु ।
मझेरीमा अरू लेखकहरूको रचना कत्तिको पढ्नुहुन्छ ? विशेष गरी मन पर्ने लेखक छन् कि ?
प्राय: सबै पढ्ने गरेको छु ।
भविष्यमा केही साहित्यिक योजना छन् भने बताइदिनुस् न !
समय र परिस्थितिले साथ दिएमा निकट भविष्यमा आफ्ना रचनाहरूको सङ्ग्रह प्रकाशित गर्ने सोचमा छु ।
तपाईं गत करीब तीन वर्षदेखि नियमित लेख्तै करीब डेढ शय रचना मझेरीमा प्रकाशित गर्नुभएको छ । यी रचनाहरूलाई सामुहिक रुपमा संग्रह गरेर बाहिर ल्याउने बारे सोच्नुभएको छ कि?
हजुर, प्रथमत : नियमित रूपमा मेरा रचना प्रकाशित गरेर मझेरीले ठूलो गुण लगाएको छ जस्कोलागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । म यी सबैको संग्रह प्रकाशित गर्ने सोचमा छु ।
संसारभरि छरिएर रहनुभएका लेखक-पाठकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
मलाई अनगिन्ती पाठकहरूले माया गर्नुभएको छ सद्भावना राख्नुभएको छ । त्यो माया र सद्भावना सदैव पाइरहुँ र साहित्य रचनामा जुन प्रेरणा दिइरहनु भएको छ त्यो प्रेरणा सदैव पाइरहुँ । संसारभरि छरिएर रहनुभएका लेखक-पाठकलाई मेरो यही हार्दिक अनुरोध छ ।
अन्त्यमा केही छ भने बताउनुहोला ।
म साहित्यलाई माया गर्ने मान्छे जो साहित्यमा आफ्नो कलम चलाउँछ त्यो मेरो हृदय भित्र बसेको हुन्छ र अत्यन्तै माया तथा सम्मान पाएको हुन्छ । नेपाली साहित्यका सम्पूर्ण हस्तीहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ ।
कोमल भट्टका रचनाहरू : यता
कोमल भट्टका रचनाहरू (संक्षिप्त अंशसहित): यता
कोमल भट्टको फेसबुक पेज : यता
कोमल भट्टको ट्विटर पेज : यता
‹ मझेरी भलाकुसारी, अंक १७ (रामकृष्ण पौडेल अनायास) मझेरी भलाकुसारी, अंक १९ (चूडा निर्भीक) ›
nandalal.acharya — Tue, 01/19/2016 - 07:38
Bhalakusarile dherai sikau6:
dinanu din naya kuro, bhinna sarjakka barema thaha pain6.
Dhanyabad majheri !
Aafna manka shabdaka lagi sarjak BHATTA jyulai Dhanyabad !
...NEPALI SAHITYAMA PATHAK BANNE SANSKRITI KO BIKAS SAMET HOS...CONGRATULATION
komal bhatta (not verified) — Sat, 01/23/2016 - 21:00
यो सद्भावनाकोलागि हार्दिक धन्यवाद !
SabitaRai — Thu, 01/21/2016 - 16:16
अन्तर्वार्ता पढेर खुसी लाग्यो । धेरै ज्ञान गुनका कुराहरु हजुरबाट थाहा भयाे । धन्यवाद हजुरलाइ । धन्यवाद मझेरीलाई पनि ।
komal bhatta (not verified) — Sat, 01/23/2016 - 21:01
भट्टजी धेरै धेरै धन्यवाद ।
HomSuvedi — Thu, 01/21/2016 - 16:55
भट्टजी धेरै धेरै धन्यवाद । अाफ्ना भावना र अनुभव तथा भुक्तमानहरुलाई सजीव र निडर भएर पाठकका माझमा राखिदिनु भो । सबै पक्षलाई समेटेर अन्तरवार्ता दिनुभो । यसका लागि म अात्मिक रुपमा अाभारी छु । तपाई‌ले भनेझै मेरा सामग्री पनि मझेरीले धेरै प्रकाशित गरिदिएकाे छ । यसैले म मझेरीदेखि समेत अाभारी छु । नयाँ नयाँ सामग्रीहरु पढ्न पाइरहूँ । यही कामना गर‌े ।
komal bhatta (not verified) — Sat, 01/23/2016 - 21:02
Buddhi Moktan — Fri, 01/22/2016 - 02:11
कोमल भट्ट सरलाइ गहिरो सग पढ्न र बुझ्न पाइयो यो मौकाको लागि भट्ट सर र मझेरी परिवारमा हार्दिक धन्यबाद
कोमलजीलाई समय निकालेर
editor — Sun, 01/31/2016 - 05:35
कोमलजीलाई समय निकालेर अन्तर्वार्ता दिनुभएकोमा धन्यवाद छ । पाठक-स्रष्टाको दूरी केही हदसम्म कम गर्ने प्रयास जारी नै रहनेछ ।
यो सद्भावनाकोलागि हार्दिक
komal bhatta (not verified) — Thu, 02/04/2016 - 06:21
मधुपर्क र म
कम्जोर ठान्यौ कि क्या हो ?
सीमाना कटाउने बेला हो यो
क्रय-बिक्रय जीवन होइन
जनमत प्रकाशनको कवितासङ्ग्रह प्रथम खण्डको विवेचना
जीवन एक सङ्घर्ष अनेक मोड
त्याग्ने जति त्यागी सक्यौ
तिमीले साथ छोडेपछि
विश्व रंगमञ्च हेर
तीन मुक्तक (टिनएजर, प्रेम, काँचो प्रेम)
ती पलहरू त बिती गए
जिन्दगीको दौड़ाह माँ, तिमी मलाई शाथ देऊ ..!
आजको सन्दर्भमा गजलकारहरूले गजलमा खेल्नु पर्ने भूमिका
तिम्रो त्यो मोहक रूपको .बर्णन कसरी गरौँ म
तिमी टाढा नभाग
नुमा र याद